Somaliland oo tallaab ka qaadeysa dadka ku dhex qayila meelaha dad weynaha ku kulmaan - BANDHIGA
Maamulka iskiisa ugu dhawaaqay madax banaanida ee Somaliland oo kal hore u diyaar garowday inta uusan cudurka soo gaarin Africa ayaa qaaday talaabooyin dhoowr ah oo looga hortagayo Corono, waxeyna maanta ku dhawaaqday in talllab laga qaadi doono cid alaala cidii lagu arko iyadoo jaad ku dhex cuneysa goobaha dadweynaha ku kulmaan ee deeganada Somaliland.
Maxamed Kaahin Axmed oo ah Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliland oo Warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in aan marnaba la ogolaaan doonin in dadka ay si koox koox ah Jaadka( Qaadka) ugu cunaan goobaha la isugu yimaado sababo la xiriira Caabuqa Dunida faraha baas ku haya ee Coronavirus.
Isagoo hadalkiisa sii wata wasiirka waxa uu intaasi ku darey in Maalinta Berito ah Guud ahaan deegaannada Soomaaliland lagu daadin doono ciidamo tallaabo ka qaada dadka sida Koox kooxda ah u cuna Jaadka.
Somaliland ayaa horay u karan tiishay 16 ruux oo laga helay caabuqa Carona.
By : Press room Tags: Somaliland oo tallaab ka qaadeysa dadka ku dhex qayila meelaha dad weynaha ku kulmaan